Ilig - Gpedia, Your Encyclopedia
Ilkaha qofka qaandhaadhla ah.
Ilkaha iyo Miciyaha daanyeerka.
Muuqaalka ilkaha, gowsaha iyo miciyada dadka.
Ilig wadar ahaan loo yaqaano Ilko (Af-Carabi: سن Af-Taliyaani: dente Af-Ingiriis: tooth Amxaari: ጥርስ) waa laf cad, adag oo afka dadka, xoolaha iyo in badan oo xayawaanka ku dhex taala.
Ilkahu waxay ka soo baxaan ciridka ku dhex yaala afka. Ilkaha balaadhan ee dhumucda wayn waxaa loo yaqaanaa Gowso, halka miciyuhu yihiin kuwo dhaadheer oo fiiqan. Afarta ilig ee hore ee dhabanka sare ku yaala waxaa lagu magacaabaa 4ta fool.
Shaqada ilkuhu waa ineey burburiyaan iyo jajabiyaan walxaha afka soo dhexgala sida cuntada iyo ineey qaab u sameeyaan dhabanada.
Qofka qaangaadhka ah wuxuu leeyahay 32 ilig oo u kala baxa, 20 gows, 4 mici iyo 8 ilig. Sidoo kale, ilkuhu waxay ku kala yaalaan daanka sare - oo leh 16 ilig - iyo daanka hoose oo leh 16 ilig.
Si ka duwan dadka, xayawaanku wuxuu leeyahay ilko af badan oo aad u fiiqan, kuwaas oo si fudud wax u kala jari kara. Xayawaanaadka bada, sida Libaaxbadeedku wuxuu leeyahay ilko miinshaar ah.
1 Ilkaha Dadka
1.1 Samaysanka iyo Koritaanka Ilkaha
1.2 Qaabdhismeedka Ilkaha
1.3 Xanuunada Ilkaha
2 Ilakaha Xayawaanka
Qaabdhismeedka ilkaha dadka.
Cilmiga barashada, daawaynta iyo fahanka ilkaha iyo ciridka aadamaha waxaa loo yaqaanaa "Dental". Ilkaha oo dhamaantood ah 32, ayaa waxa loo kala saaraa Ilkaha sare iyo ilkaha hoose.
Ilmaha yar ee dadku wuxuu leeyahay 20 ilig, laakiin qofka qaangaadhka ah wuxuu leeyahay 32 ilig oo u kala baxa, 4 fool, 20 gows, 4 mici iyo 4 ilig. Sidoo kale, ilkuhu waxay ku kala yaalaan daanka sare - oo leh 16 ilig - iyo daanka hoose oo leh 16 ilig.
Jeex ilkaha hoose ooy ka dhex muuqdaan foolasha hoose, miciyada hoose iyo gowsaha hoose.
Ilkaha dhabanka midig.
Ilkuhu waxay ku dhex yaalaan ciridka sare iyo kan hoose ayagoo ku wareegsan daanka bidix ilaa midig.
Ilkuhu waxay yihiin xubnaha ugu adag jidhka dadka.
Samaysanka iyo Koritaanka Ilkaha
Ilkaha yaryar ee dadka.
Ilkaha dadku waxay ka mid yihiin waxyaabaha ugu cajabta badan ee jidhka bani-aadamka. Inta u badan ilmaha dadku ma lahan ilko markeey soo dhashaan - tiro yar ayaa ilko la soo dhasha - laakiin bilo ka dib, ilko yaryar ayaa u soo baxa ilmaha.
5 Sanno ilaa 10 sanno markuu ilmuhu jiro ayaa ilkihii yaryaraa ka dhacaan oo ilko cusub oo awood badan kana waawayn kuwii hore u soo baxaan ilmaha. Ilkuhu waxay ka samaysmaan unugyo carjow ah kuwaas oo wakhti ka dib adkaada awoodna yeesha.
Si la mid ah xayawaanka intiisa kale, ilkaha dadku waxay dhex qotomaan ciridka kuwaas oo ciridka kula jira in ka badan inta muuqata.
Lakabka ugu sareeya ilkaha waa mid laf cad oo aad u adag, taasi oo suurtogelisay in si fudud ilkuhu wax u burburiyaan. Qolofka sare ee ilkaha waxaa ka hoosee carjow adag oo loo yaqaano Dentin taas oo ayada lafteedu aad u adag.
Dentin waxaa ka hooseeya jiidh yar oo ciridka ka mid ah oo ay dhex socdaan xidido dhiiga kor iyo hoos u dhex wada ilkaha.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Ilig&oldid=143160"